Porn ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အငြင်းပွားမှု ၄ ခု - သူတို့တရားဝင်ပါသလား။ (L. Hatch PhD) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Porn အသုံးပြုမှုများအတွက်ထိပ်တန်း4Arguments: သူတို့ကသက်တမ်းရှိရှိပါသလား ( L. Hatch ပါရဂူဘွဲ့)
လိင်စွဲအစဉ်အဆက်ညစ်ညမ်းအသုံးပွုသငျ့? အခြားလိင်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူအမျိုးမျိုးရှိသောလိင်စွဲလမ်းသူသည်သူတို့၏အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပြaနာမဟုတ်သော်လည်းကောင်းမွန်သောအရာပင်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားရန်ဆင်ခြေပေးလေ့ရှိသည်။ သူတို့မှားလား ပစ္စုပ္ပန်နှင့်စွဲစွဲလမ်းသောစွဲလမ်းစေသည့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုအချို့ကိုကြည့်ကြပါစို့ my တရားဝင်မှုရမှတ် အသီးအသီးအဘို့။ ဆက်ဖတ်ရန်
ဒါကြောင့်ဒုက္ခထဲကငါ့ကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, porn OK ကိုဖြစ်ပါတယ်။
များစွာသောစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများအတွက်ကုသမှုတွင်စွဲလမ်းသူများစွာသည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်အန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့စွန့်လွှတ်လိုက်သောပိုမိုအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများကိုကြည့်သည်။ ၎င်းတို့အားဖမ်းဆီးခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ပစ်ခြင်းစသောအပြုအမူများကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုသည်အန္တရာယ်ကင်းသောထွက်ပေါက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါအငြင်းပွားမှု "ဒါဟာအများကြီးပိုဆိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်; ငါဘာကိုကြည့် အသုံးပြုခံ့ လုပ်ရန်!"
ရာခိုင်နှုန်းကိုတရားဝင်: 5% ။ အချို့ရှိ စောဒကတက် ကြောင်း porn လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သို့မဟုတ်ချမှတ်ခြင်းကလေးသည်ညစ်ညမ်းရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ် ဥပဒေရေးရာ ရာဇဝတ်မှုလျော့ကျလိမ့်မယ်။ လိင်မှုကျူးလွန်သူအချို့သည်လိင်မှုကျူးလွန်သူများကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အမှန်တကယ်ထိတွေ့ခြင်းမှကလေးငယ်များကိုထိတွေ့ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်ကူညီနိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အသိအမြင်အားဖြင့်, porn ကိုလိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက်အန္တရာယ်လျှော့ချရေးကုသမှုလက်ခံခဲ့သည်ပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။
ရာခိုင်နှုန်းမမှန်ကန်တဲ့ - 95% ။ လိင်စွဲလမ်းသူအများစုနှင့်လိင်စွဲလမ်းသူအများစုသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုပြန်လှည့်စေသည့်အစပျိုးမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းအတွေ့အကြုံမှသိကြသည်။
ရာခိုင်နှုန်းတရားဝင်: 25% ။ ငါကဒီအချက်ကို ၂၅% ပေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့လိင်ကုသသူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့လိင်စွဲလမ်းသူဖောက်သည်တွေနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျိန်ဆဲတဲ့သူကပိုကောင်းတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အပြုအမူတွေကိုရယူဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုလိုအပ်နေတယ်။
ရာခိုင်နှုန်းမမှန်ကန်တဲ့ - 75% ။ စွဲလမ်းမှုအားလုံးကဲ့သို့ပင်လိင်စွဲမှုသည်တိုးတက်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိင်စွဲသူများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုအစွန်းရောက်သောစိတ်ကူးယဉ်မှုများနှင့်အပြုအမူများသို့ ဦး တည်သွားလေ့ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကစွဲလမ်းသူအားအန္တရာယ်ပိုကောင်းသောနယ်မြေသစ်သို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ငါ့အဖက်နဲ့ကျွန်မကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝတက်မြိန်ဖို့ကအသုံးပြုတဲ့အခါ porn ကျန်းမာဖြစ်ပါသည်
လူအတော်များများ, စွဲနှင့် Non-စွဲရောနှောမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်သို့မဟုတ် enliven တစ်လမ်းအဖြစ်၎င်းတို့၏အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ porn ကိုအသုံးပြုပါ။
ရာခိုင်နှုန်းတရားဝင်: 10% ။ ဒီကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရသောစုံတွဲများများအတွက် 100% OK ကိုဖြစ်နိုင်သည် မဖက်တဲ့လိင်စှဲလမျးသူဖြစ်ပါသည် နေသမျှကာလပတ်လုံးကနှစ် ဦး စလုံးနှစ် ဦး စလုံးအားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအတိုင်း။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး သည်လိင်စွဲလမ်းသူဖြစ်လျှင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်။
ရာခိုင်နှုန်းမမှန်ကန်တဲ့ - 90% ။ မိတ်ဖက်တစ် ဦး သည်လိင်စွဲလမ်းသူသို့မဟုတ်ပြန်လည်စွဲလမ်းသောလိင်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်နောက်ကျောတံခါးမှတစ်ဆင့်စွဲလမ်းစေသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ စွဲလမ်းသူသည်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းကိုလိင်တူခြင်းပြုကျင့်သူအားစုံတွဲအဖြစ်လိင်ဆက်ဆံရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုသုံးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါမိတ်ဖက်တစ် ဦး မလိုလားအပ်သောကြံရာဖြစ်နိုင်သည်။
porn စုံလငျ, ပုဂ္ဂလိက, ဝိညာဏအတှေ့အကွုံမြားကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
လိင်စွဲလမ်းသူများသည်သူတို့၏စံနမူနာပြညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွေ့အကြုံသည်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်ဟုမကြာခဏမြင်ကြသည်။ စွဲသူများနှင့်အခြားသူများသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်း မှလွဲ၍ မိမိတို့၏လိင်ဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုကိုယ်ပိုင်လမ်းဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုခံစားကြရသည်။
ရာခိုင်နှုန်းတရားဝင်: 15% ။ ငါဒီစိတ်ကူးကိုနည်းနည်းလောက်ပေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါလိင်စွဲလမ်းသူတွေကပွင့်လင်းမှုနဲ့ရိုးသားမှုကိုအထူး ဦး စားပေးလေ့ရှိတဲ့အတွက်လူတွေဟာလူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ဘဝမှာနက်ရှိုင်းစွာလူ့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့မေ့နေလို့ပါ။ ငါတို့အားလုံးဟာငါတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးတွေ၊ ခံစားချက်တွေနဲ့စိတ်ကူးယဉ်တွေရှိဖို့လိုတယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှမဝေမျှချင်ကြဘူး။
ရာခိုင်နှုန်းမမှန်ကန်တဲ့ - 85% ။ porn သည်ပြင်းထန်ပြီးစားသုံးနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ဘာသာရေးအတွေ့အကြုံမဟုတ်ပါ။ စင်စစ်အားဖြင့်ချာ့ချ်များစွာသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုများကိုရုန်းကန်နေရသောသူတို့၏အသင်းသားများအတွက် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပေးရာတွင်အလွန်တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်လာသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းကျင့်သုံးနေသောလိင်စွဲလမ်းသူများသည် ၀ ိညာဉ်တံခါးတစ်စုံတစ်ရာမျှမတွေ့ရပါ။